मबि सिँह, (बोस्टन)
टुट्ने जोड हो यो कस्तो ?
घट्ने योग हो यो कस्तो ?
मेरो शोख हो यो कस्तो ?
धामी झाँक्री हार खाए
दीर्घ रोग हो यो कस्तो ?
न्याय पनि माग्नु पर्ने
अफसोच हो यो कस्तो ?
कम दियौ - बढि लियौ
सहयोग हो यो कस्तो ?
आफू चढ्ने सिँढी भाँच्ने
प्रतिशोध हो यो कस्तो ?
दया माया मागी हिड्ने
कमजोर हो यो कस्तो ?
बाँकी हाड खोड मात्र
लुट्ने होड हो यो कस्तो ?